iPhone nihidy tamin'ny IMEI - fantaro raha nisy nangalatra ny iPhone
iPhone mihidy avy amin'ny IMEI
Eto amin'ity pejy ity no azonao atao fantaro raha iPhone mihidy avy amin'ny IMEI. NAn iPhone dia afaka mihidy amin'ny IMEI satria izy io angalarina, dia very na noho ny trosa niaraka tamin'ny mpandraharaha.
Hamarino raha mivarotra anao iPhone voalaza izy ireo alohan'ny mividy azy io. Ireo iPhones voahidy IMEI dia tsy azo ampiasaina amin'ny mpitatitra ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy azo vohana.
0.1 Voahidy sa nangalarina ny iPhone?
1 Ahoana no hahalalana raha nangalatra iPhone
2 Azonao atao ve ny mamoha iPhone voahidy amin'ny IMEI?
Voahidy sa nangalarina ny iPhone?
Ampiasao ity takelaka manaraka ity hahitana raha misy iPhone mihidy na nangalarina:
Handray ny angona iPhone rehetra ianao amin'ny mailaka mifandraika amin'ny kaonty Paypal anao na ny mailaka soratanao raha mandoa amin'ny carte de crédit ianao. Raha ny mahazatra dia hahazo ny fampahalalana ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 15 minitra ianao, fa amin'ny tranga manokana dia mety hisy ny fanemorana hatramin'ny 6 ora.
IMEI nasiana marika nangalarina / very ao amin'ny tahiry Apple: Tsia / Eny
Raha maniry ianao dia azonao atao koa ny manamarina raha izany mihidy amin'ny iCloud, avy amin'ny orinasa iza no iPhone-nao, raha manana fifanarahana maharitra ary raha mety mamoha amin'ny IMEI Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny safidy amin'ny drop-down fandoavam-bola dia tsy mila mandoa vola kely fotsiny ianao hanitarana ity vaovao ity.
Ahoana no hahalalana raha nangalatra iPhone
Zava-dehibe tokoa ny hoe rehefa mividy fitaovana Apple iPhone faharoa tanana dia ho hitantsika tsara raha voahidy IMEI ity iPhone ity. Ny antony lehibe mahatonga ny orinasa misafidy ny hanakana fitaovana finday amin'ny alàlan'ny kaody IMEI dia satria ny tompony efa diso toerana na nangalatra azy tsy ara-dalàna. Izany no antony tsy maintsy hamarotantsika ny maha-marina ny kaody IMEI mifandray amin'ny fitaovana iray, ka manamarina fa ara-dalàna tanteraka ny niandohany.
Izany no mahatonga ny serivisy omenay anao hamela anao hahalala amin'ny indray mipi-maso fotsiny raha voasakana ny IMEI na tsia ny iPhone. Ka hisorohana ny fisolokiana mety hitranga sy ny fahazoana fitaovana tsy ara-dalàna ny fihaviany.
Azonao atao ve ny mamoha iPhone voahidy amin'ny IMEI?
Amin'ny ankapobeny dia ireo orinasan-telefaona izay manana fahefana hanidy sy hamaha ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny kaody IMEI. Izany no antony, raha te hamoha iPhone izay nosakanan'ny IMEI teo aloha isika, handeha mivantana any amin'ny orinasan-telefaona tompon'andraikitra amin'ny sakana isika, mba hanamafisana ara-dalàna fa tafaverina ilay fitaovana ary eo am-pelatanan'ny tompony ara-dalàna, ohatra, azonao atao ny mampiasa ny faktiora fividianana mifandraika amin'izany.
Ho an'ireo voalaza etsy ambony ireo, dia manolotra ity serivisy ity izahay hanome anao ny fahafantarana avy hatrany raha ny iPhone nokasainao hividy dia mihidy amin'ny alàlan'ny IMEIFenoy fotsiny ny fampahalalana mifandraika amin'ny kaody IMEI an'ny fitaovana tianao hividy amin'ny endrika manaraka, ary koa ny mailaka izay tianao handraisana ny tatitra momba ny valiny izay hahafantaranao ny sakan'ny sakana IMEI. Amin'ny alàlan'ny famenoana ny angona ao amin'ilay takelaka ihany no hahazoanao mailaka miaraka amin'ny tatitra momba ny angon-drakitra nangatahina tao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra (amin'ny tranga manokana dia mety hahemotra hatramin'ny 6 ora).